Ahịa Ahịa: Hụ Ezi Ike Pụrụ Iche na Ihe Nlereanya Ndị A | Martech Zone
Ahịa ahịa - ọ bụ ihe ị nwere ike ịnụ banyere, mana, ọ nwere ike bụrụ na ị na-ahapụ azụ ọkụ ugbu a. A sị ka e kwuwe, enwere ọwa dị iche iche maka azụmaahịa, ọ bụ azụmaahịa mkpanaka abụghị nke enwere ike ileghara anya?
Chọpụta - ị nwere ike itinye uche na ya 33% nke ndị mmadụ ndị na-adịghị eji mobile ngwaọrụ kama. A na-atụ anya ka ojiji nke ngwaọrụ mkpanaka n'ụwa niile toro ruo 67% site na 2019, ma anyị anọghị ebe dị anya ugbu a. Ọ bụrụ n ’ị ga - eleghara nnukwu akụkụ nke ahịa ahụ anya, ị ga - achọpụtarịrị ahịa agagharị.
Ahịa Mobile Na-eme Sense Maka Ndị Ahịa
Kedu oge ikpeazụ ị gara ebe ọ bụla na-enweghị ekwentị gị? Ma ọ bụ gaa ebe ọ na-enweghị onye ọzọ nwere otu? Ekwentị mkpanaka, karịsịa smartphones, na-enye anyị ozi anyị chọrọ n'ụzọ dị mma.
Anyị nwere ike iji ngwa, ndị na-enyere aka mebere, yana lelee ozi ịntanetị anyị. Ngwaọrụ anyị anaghị ahapụkarị anyị. Yabụ, ọ bụ ihe ezi uche dị na ya ịzụ ndị ahịa gị na ekwentị ha?
Ahịa Mobile Na-eme Sense Maka ieslọ Ọrụ
Maka obere ego, ị nwere ike ịmepụta ọtụtụ mkpọsa ga-adabara ahịa gị na mmefu ego gị.
A ọma e ngwa, dịka ọmụmaatụ, nwere ike inye aka ịkwanye ahịa. ASDA mere nke a ka ọ baara ya uru mgbe ọ bịara ịkwalite ire ịntanetị. Ebudatara ngwa ya ugboro 2 ugboro, na-egosi na ndị ahịa dị njikere itinye aka na ụlọ ọrụ ahụ. Ahịa site na ngwa ahụ ji okpukpu 1.8 dị elu karịa na ha nọ na kọmpụta desktọọpụ.
Na mkpokọta, oru ngo ahụ gara nke ọma.
Mana ngwa ngwanrọ abụghị ihe ngwọta kwesịrị ekwesị maka ụlọ ọrụ ọ bụla. Kedu ihe ị na-elekwasị anya mgbe ahụ?
Na-anabata Mobile Design
Walmart belatara ogologo oge ya site na 7.2 sekọnd ruo 2.3 sekọnd. Nke ahụ anaghị ada ụda nke ukwuu rue mgbe ị ghọtara nke ahụ 53% nke ndị mmadụ ibiaghachi na saịtị nke na-ewe ogologo oge karịa sekọnd atọ iji kwado.
Site na ichota foto, igbanwe ederede, na iwepu igbochi Java, Walmart nwere ike belata oge ibu nke saịtị ahụ. Ọ bara uru? N'ịtụle na ntụgharị ntụgharị mụbara site na 2%, ọ mere n'ezie.
Nissan weere mmeghachi omume na ọkwa ọzọ site na ịmepụta vidiyo mmekọrịta. Ọ bụrụ n'ịhụ ihe masịrị gị, mgbata dị mfe na ihuenyo ga-ezuru iji weta nkọwa niile dị mkpa. Mgbasa ozi ahụ gara nke ọma site na ngwụcha nke 78% na njikọ aka nke 93%.
Mobile Mobile bụ ngwá ọrụ dị ike nke na-enye ndị na-ere ahịa ọtụtụ ụzọ ọhụụ dị irè ma dị irè ma na-efu ụlọ ọrụ. Ọ gụnyere ọtụtụ ihe karịa naanị ngwa ma ọ bụ weebụsaịtị kacha mma.
Nke a bụ ihe ọzọ ị nwere ike ịtụle maka azụmahịa gị:
Redirection saịtị ekwentị
Ọrụ ndị dabere na ọnọdụ
Ọ bụrụ na, dịka azụmahịa, ịchọrọ karịa ROI mgbe ọ na-abịakwute ahịa gị na-emefu, ahịa mkpanaka na-enye gị ụzọ ị ga-esi rute ndị ahịa na ọnụ ala dị ala. Oge eruola ka ụlọ ọrụ gị bido ịnabata ike nke ngwa ọrụ a bara oke uru.
Lelee ihe omuma a di egwu site na Appgeeks.org, zuru ezu na ihe atụ, Etu otu ahia si eji ire ahia eme ihe na uru ha. Appgeeks.org na-enye ndị na-agụ data dị mkpa gbasara ndị na-eweta ngwa mkpanaka kachasị elu.
Tags: ngwaasdaBluetoothCarl's jrDunkin 'Donutsemailikehalifaxebe obibiecheNa-egwuregwu egwuregwuKLMlbmọrụ dabere na ọnọdụihe omuma ahia ahiaRedirection saịtị ekwentịNissanpizzakpọbata ọkwaKoodu QRUhie ụlọ uhieseattle anwụ tanSMSstarbuckstaco mgbịrịgbaụlọ ịgba egwu abalịtopshopWalmart
The Top 5 Mere Brands mgba na Quantify Social ROI